News Code : 689355
အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)သည် ဟူရ်ဗင်ယဇီးဒ်ရေယာဟီ စစ်တပ်နှင့်ထိပ် တိုက် မျက်နှာချင်းဆိုင် တွေ့ပြီးနောက်၊ကရ်ဘလာကွင်းပြင်တွင် ရပ်နားပြီးခွသ်ဗာ တော်တစ်ခုအား ဖတ်ရွတ်တော်မူခဲ့လေသည်။ထိုခွသ်ဗာမှ ကဏ္ဍတော်တစ်ချို့တွင် ဤသို့မိန့်တော်မူထားလေသည်။
أَلا تَرَوْنَ أَنَّ الْحَقَّ لا يُعْمَلُ بِهِ، وَأَنَّ الْباطِلَ لا يُتَناهى عَنْهُ، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقاءِ اللهِ
အဓိပ္ပါယ်။။အို ကျွန်တော်၏ ဘက်တော်သားအပေါင်းတို့ခင်ဗျား၊အသင်တို့အနေဖြင့် အမှန်တရားကိုမေ့ပျောက်သွားကြပြီး အမှားမတရားမှုဟာ လူပတ်ဝန်းကျင်ကို သိမ်း ပိုက်ထားကြောင်း မမြင်ကြပါလော?ဤကဲ့သို့သော် အခြေအနေတွင် မိုမင်မနုဿလူ သားအနေဖြင့်(အမှန်တရားကို ရှင်သန်အောင်ပြုခြင်းနှင့် အမှားမတရားကို ရှင်းလင်း သုတ်သင်ခြင်းလမ်းတွင်)အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် တွေ့ဆုံရန်(ရှဟီးဒ်အဖြစ်ခံယူ ရန်)အသင့်အနေ၊အထားတွင် ရှိနေရပါမည်။
အမှန်တရားနှင့် အမှားမတရားကို ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်တွင် အမှန်တရား နှင့် အမှားမတရားဆိုင်ရာ အဖြစ်အပျက်အကြောင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)မှ ထို (အထက်ဖေါ်ပြပါ)ခွသ်ဗာတွင် လမ်းညွှန်ပြထားတော်မူပါသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ် အာန်၌(ဤအမှန်တရားနှင့် အမှားမတရားတို့ပတ်သက်နေသည့်)အဖြစ်အပျက်အား အပြည့်အစုံ၊အကျယ်တဝင့် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ကျွန်တော်အနေဖြင့် ၎င်းမှအချို့ဗဟို အချက်အချာကျမှုကို ညွှန်ပြပါမည်။
အမှန်တရားနှင့်အမှားမတရားတို့၏အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အကောင်းဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှာ အမှန်တရားနှင့်အမှားမတရား၏ပုံကို ဖေါ်ပြ တင်ပြနိုင်ခြင်းဖြစ်ပေသည်။ထို့အပြင် ဤဥပမာအတွက် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်အနေဖြင့် စူရာဟ် ရအ်ဒ် အာယတ်တော်အမှတ်(၁၇)တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။ မိန့်ကြားတော်မူထားပါသည်။
أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَداً رَّابِياً وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِى النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَة أَوْ مَتَاع زَبَدٌ مِّثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الاْرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللهُ الاْمْثَالَ
အဓိပ္ပါယ်။။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် မိုးကောင်းကင်မှ မိုးရွာသွန်းစေ၏။ထို အခါချောင်းလျိုတိုင်းနှင့်အညီ ရေများစီးထွေလာလေသည်။ပြီးနောက် ပြင်းထန်စွာရေ စီးဆင်းလာပြီး ရေကြီး၊ရေတက်လာပေသည်။(ထိုနည်းတူစွာ)လက်ဝတ်၊ရတနာများ (သို့)ဘဝအသုံးအဆောင်၊ပစ္စည်းများပြုလုပ်ရန် မီးချရလေသည်။အညစ်အကြေးများ ပြောင်သွားလေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်အနေဖြင့် ဤနည်းအတိုင်း အမှန် တရားနှင့်အမှားမတရားကို ပုံနှိုင်း သာဓကပေးထားတော်မူလေသည်။နောက်ဆုံးအ ညစ်အကြေးများသည် အပြင်သို့ထွက် လာပေသည်။သို့သော် လူထုအတွက် အကျိုး ပြုသည့် အရာမှန်သမျှသည်(ရေ(သို့)သီးသန့်၊သတ္တု)သည် မြေပထဝီပေါ်ဝယ် ကျန်ရှိ ခဲ့လေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် ဤကဲ့သို့ ဥပမာများ၊ပုံနှိုင်းများပေး တော်မူလေသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်မှ မီးမောင်းထိုးပြနေပါသည်။အမှားမတရား သည်အခေါင်းပေါက်၊ခါလီဖြစ်ပေသည်။အသံသာအပြည့်ဖြစ်ပြီး၊အညစ်အကြေးနှင့် ရောထွေးကာ၊အကျိုးမဲ့၊ရလာဒ်မဲ့ ဖြစ်ပေသည်။အမှားမတရားမှု၏ သက်တမ်းသည် တိုတောင်းလှပေသည်။သို့သော်အမှန်တရားသည် အကျိုး၊အမြတ်၊ရလာဒ်အပြည့် ၊အဝ၊သန့်ရှင်း၊စင်ကြယ်၊သန့်စင်၊လှပပြီး ရှင်သန်မှုအတွက် အရင်းအနှီးနှင့် ထာဝရ ဖြစ်ပေသည်။အမှန်တရား၏ သက်တမ်းသည် ရှည်လျား၊ကြာမြင့်ပေသည်။မုချဧကန် အမှန်တရားနှင့် အမှားမတရား၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် လှလှပပနှင့် အသက်ဝင်ဆုံး အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်မှ ဖေါ်ပြထားသည်။(ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်၏ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုချက်)ထက် ပိုကောင်းသည့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် မရှိနိုင်ချေ။
စူရာဟ်ဟဂ်ျ အာယတ်တော်အမှတ်(၆၂)တွင် စကြဝဋ္ဌာအတွက် တွေးခေါ်စဉ်း စားရန် အတွက်လာရှိပေသည်။ဤအာယတ်တော်ပြီးနောက် အာယတ်တော်တွင် ဟက်ကေမိုသလက်(က)(ဘက်စုံ၊ထောင့်စုံမှ၊တုနှိုင်းမရသည့်အမှန်တရား)သည်သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်၊စင်ကြယ်တော်မူသည့် ဇာတိတော်ပိုင်ရှင်သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် သခင်ဖြစ်ကြောင်းတင်ပြထားပေသည်။
ذَلِكَ بِأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيرُ
အဓိပ္ပါယ်။။ဤအရှင်မြတ်သည်သာလျှင် မုချဧကန် မှန်ကန်သော အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်ပင်တည်း။၎င်းမှအပ မည်သူကိုပင် ၎င်းတို့ဟစ်အော်၊တမ်းတသူများ၊အရများ သည် အမှားမတရား ဖြစ်ချေသည်။ဧကန်မုချ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်သည် အလွန်တရာကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တော်မူသောအရှင်၊ကြီးမားတော်မူသည့်အရှင်ဖြစ် တော်မူပေသည်။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်ပါသည်။လက်ရှိကမ္ဘာပေါ်တွင်(စကြဝဋ္ဌာတွင်)အရေးအကြီး တကာ့အကြီးဆုံး အမှန်တရားမှာ သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်၊စင်ကြယ်တော်မူသည်။ဇာတိ တောပိုင်ရှင်မှာ်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင် ဖြစ်တော်မူပေသည်။မည်သည့် တည်ရှိ နေသည့်အရာမှန်သမျှ၊အရွယ်အစားမှန်သမျှ၊ပုံသဏ္ဍာန်မှန်သမျှ၊၎င်းတို့၏ဖန်ဆင်းရှင် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်နှင့် ဆက်သွယ်မှုနီးကပ်လေလေ၊အလ္လာဟ်ဟိုအရှင် မြတ်သခင်နှင့် နီးကပ်မည်ဖြစ်ပြီး၊ထိုနီးကပ်မှုနှင့်အညီ အမှန်တရားဖြစ်ရပ်မှန်အစစ်ကို ရယူနိုင်မည်ဖြစ်ပေသည်။ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန်သည် အမှန်တရားဖြစ်ပေသည်။
အကြောင်းမှာအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကလာမ်တော်(ဩဝါဒတော်များ)ဖြစ် သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။တမန်တော်မြတ်များ(အ.စ)သည် အမှန်တရားဖြစ် ပေသည်။အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဘက်တော်မှ စေလွတ်တော်မူခြင်းခံ ရသူများ ဖြစ်ကြပေသည်။စစ်မှန်သည့် အစ္စလာမ်မီအချုပ်အခြာအာဏာသည် အမှန် တရားဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ ၎င်းဘက်မှအလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ရှိတော်မူသည်။ ထို့ပြင် နှိပ်စက်၊ညှဉ်းပန်း၊သတ်ဖြတ်သူများ၊ယုတ်မာ၊ပက်စက်သူများ၊သူခိုးများ၊လော ကီမက်မောသူများ၏ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပေသည်။ဤအရာများသည် အမှားမတရား များဖြစ်ပေသည်။အကြောင်းမှာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ဝေးကွာနေပြီး၊အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ်မဟုတ်သူကို တမ်းတသည့်အတွက် ဖြစ်ပေသည်။
တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)အနေဖြင့် မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်အား အောင်နိုင်တော် မူပြီး၊ကအ်ဗာဝတ်ကျောင်းတော်အတွင်း စံမြန်းတော်မူသည့်အချိန်တွင် အလ္လာဟ်ဟို အရှင်မြတ်သခင်ကြီး၏ အိမ်တော်အတွင်း မက္ကာဟ်ရွှေမြို့တော်အနီးအနားရှိ မျိုးနွယ် စုများ၏ ရုပ်ထု၊ဆင်းတု(၃၆၀)ရှိနေပေသည်။ကိုယ်တော်မြတ်(ဆွ)သည် ၎င်းရုပ်ထု၊ ဆင်းတုတော်များကို တစ်ခုချင်းဆီ မိမိ၏လက်ကိုင်တုတ်ဖြင့် မြေပြင်ပေါ်သို့ ဆွဲချ တော်မူခဲ့လေသည်။ပြီးနောက် ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အာန် စူရာဟ်အာယတ်အမှန်
جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً
အဓိပ္ပါယ်။။အမှန်တရားရောက်လာချေပြီ၊အမှားမတရားပျက်စီး သွားချေပြီ။အ ကြောင်းမှာအမှားမတရားမှုသည် ပျက်စီးရမည့် အရာသာဖြစ်ပေသည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။သောင်ဟီးဒ်၊တစ်ပါးတည်းအတုမဲ့အရှင်ကို ခဝပ် ကိုးကွယ် ဆည်းကပ်ခြင်းသည် အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး အမှန်တကာ့အမှန် ဆုံး စကြဝဋ္ဌာ၏ ဖန်ဆင်းရှင်အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်နှင့် ဆက်သွယ်ရန်ဖြစ်ပေသည်။ ဤသည် ဟက်(က)အမှန်တရား ဖြစ်ပေသည်။ရှေးရ်က်နှင့်ရုပ်ထု၊ဆင်းတုကိုးကွယ် ခြင်းသည်ဗာသွေလ်(ခ)အမှားမတရား ဖြစ်ပေသည်။ဤသို့ဖြင့် ဒဲဟ်ဟေဖဂ်ျရ် အင် ကေလာဗ်ဗေအစ္စလာမ်မီအီရန်(အေမာမ်ခိုမေနီ(ရ.ဟ))ပြင်သစ်မှ အီရန်သို့ပြန် ရောက်လာသည့်နေ့မှ လွတ်လပ်ရေးရသည့်အထိ ကြာမြင့်သည့်(၁၀)ရက်တာကာ လ)တွင် အထက်ဖေါ်ပြပါ အာယတ်တော်အား အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ထပ်ခါ၊ထပ်ခါ၊ ရွတ်ဆိုကြပေသည်။
အကြောင်းမှာ-ဗာသွေလ်(အမှားမတရား)အပေါ်တည်နေသည့် ရှိုင်တွာန်အ ချုပ်အချာ အာဏာပိုင်အစိုးရ ပြဿနာ(မကောင်းမှုကို)ပြန့်ပွားစေသည့် အစိုးရ၊အ လွန်တရာအရှက်မဲ့သည့်အလုပ်များ ကျူးလွန်သည့်အစိုးရ၊ပြည်သူဘဏ္ဍာငွေများကို စိတ်ကြိုက်ဖြုန်းခဲ့သည့်အစိုးရ ပြုတ်သွားကြပြီး၊ဟက်(က)(အမှန်တရား)ဖြစ်သည့် အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၊အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာအာဏာ တက်လာလေသည်။ပြီးနောက် အစားထိုးနေရာ ယူခဲ့လေသည်။အစ္စလာမ်မီအစိုးရ၏ ကျောသား၊ရင်သား၊မခွဲခြားမှု များလာလေလေ၊ပြည့်စုံမှုများလာလေလေ၊အစ္စလာမ်သာသနာ့လမ်းစဉ်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးမှု ခြေလှမ်းတိုးလေလေ၊ထိုနည်းတူစွာ အညီအမျှ အမှန်တရားကိုလည်း ဆွတ်ခူးရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။
မေးခွန်း။။ဧကန်မုချ အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏ ခေတ်ကာလတွင် မြောက်များ စွာသောအမှန်တရားများသည် မေ့လျော့ခံခဲ့ရပြီး အမှားမတရားမှုများမှ ၎င်းအမှန်တရားများ၏နေရာတွင် ရောက်ခဲ့ပေသည်။
ထိုခေတ်ကာလတွင် ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအဝိုင်း၌ မည်သည့်အမှန်တရားများ မေ့လျော့ခြင်းခံခဲ့ရပြီး၊၎င်းအမှန်တရားများနေရာ၊အမှားမတရားမှုများ နေရာယူခဲ့သ ဖြင့် မည်သည့်ဟက်(က)အမှန်တရားများကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေဖို့နှင့် မတရားမှုအ မှားများကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် အလို့ငှာ တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ရပါသနည်း?
အဖြေ။။မြောက်များစွာသော နေရာများကို ဖေါ်ပြနိုင်ပါသည်။သို့သော် ဤအကျဉ်း ချုပ်၊အနှစ်ချုပ်ရေးသား တင်ပြနေသည့်(စာအုပ်)ဖြစ်ရာ(အကျယ်တဝင့်)တင်ပြရန် မဖြစ်နိုင်ချေ။လေးနေရာတည်းကိုသာဖေါ်ပြဖို့ တင်းတိမ် ကျေနပ်ရေးသားလိုက်ရပါ သည်။
သမိုင်းစာမျက်နှာ သက်သေထူနေပါသည်။ကျွန်တော် တင်ပြထားသည့်အ တိုင်း ဖြစ်ပါသည်။မိုအာဝေယာအနေဖြင့် အုပ်စုတစ်စုကို ဖွဲ့ထားပေးခဲ့ပါသည်။ထိုအဖွဲ့ မှာ ဆီးရီးယားမှ အီရတ်အေမာမ်အလီ(အ.စ)၏ အချုပ်၊အချာ အာဏာဗဟိုဌာနသို့ သွားရောက်ပြီး၊တိတ်တိတ်ပုန်း နယ်စပ်များတွင် လုယက်တိုက်ခိုက်၊ရက်စက်မှုကိုပြု ခဲ့ကြပေသည်။(နယ်စပ်ရှိပြည်သူလူထု၏)ပစ္စည်း၊ဥစ္စာများကို လုယက်ကြပြီးပြန်လှည့် သွားကြလေသည်။ဤသို့ပြုရခြင်းမှာ အီရတ်ပြည်သူလူထုအနေဖြင့် အေမာမ်အလီ (အ.စ)၏ အချုပ်၊အချာ အာဏာအား အမြင်မကြည်အောင်၊မယုံအောင်၊မျှော်လင့် ချက်မရှိတော့အောင် ပြုခြင်းဖြစ်ပေသည်။အေမာမ်(အ.စ)၏လက်အောက်ရှိ ငြိမ်ဝပ်ပိ ပြား၊ငြိမ်းချမ်းနေသည့် ဒေသများကို မငြိမ်းချမ်း၊မငြိမ်သက်အောင် ပြုကြခြင်းဖြစ်ပေ သည်။
အပြစ်မဲ့ပြည်သူလူထုအား သတ်ဖြတ်ခြင်း၊မခုခံမကာကွယ်နိုင်သူများကို သတ် ဖြတ်ခြင်း၊မွတ်စလင်များ၏ ပစ္စည်း၊ဥစ္စာများကို လုယက်ခြင်း၊အစ္စလာမ်မီအချုပ်အချာ အာဏာ အုပ်ချုပ်နေသည့်အချိန်တွင် မငြိမ်သက်၊မလုံခြုံအောင်း စီစဉ်ခြင်း စသည်တို့ ထက်ပိုပြိး မတရားမှုများ၊အမှားများရှိသေးသည်ဟု တွေးနိုင်ပါသေးသလော?
မိုအာဝေယာအနေဖြင့် ပြည်သူပိုင်၊ဘဏ္ဍာငွေကို သုံးစွဲပြီး အမီးရွလ်မိုမေနီ ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)၏ အနီးအနားရှိ အီမာန်အားနည်းသူများ၊သတ္တိ၊ဗျတ္တိနည်း သူများကို(ကိုယ်ဘက်ပါလာရန်)ဝယ်ယူခဲ့လေသည်။အကြောင်းမှာ ဟဇရတ်(သ)အ လီ(အ.စ)အားတစ်ဦးတည်း၊တစ်ပါးတည်း အထီးကျန်ခဲ့စေရန် ဖြစ်ပေသည်။
ပြည်သူပိုင်၊ဘဏ္ဍာငွေသည် အီမာန်မရှိသူများ၊ကြေးစားများကို ဝယ်ယူသုံးစွဲဖို့ အတွက် ဖြစ်ပါသနည်း? ဤကဲ့သို့သော်လုပ်ရပ်သည် အမှားမတရားကို ရှင်သန်စေ ပြီး၊အမှန်တရားကို ရှင်းလင်း၊သုတ်သင်ခြင်း မမည်ပါသလော?
မိုအာဝေယာအနေဖြင့်ဟဇရတ်(သ)အလီ(အ.စ)အချုပ်၊အချာ၊အာဏာရှိနေသည့်အ ချိန်ကာလတွင် ကိုယ်တော်၏ အစိုးရအား အားနည်း၊အားပျော့စေရန်၊ တတိယ ခလီ ဖွာ အွစ်မန်၏ လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စဖြင့် ပြဿနာရှာခဲ့လေသည်။လူထုကိုကိုယ်တော်အား ဆန့်ကျင်၊သွေးဆောင်၊ဖြားယောင်းခဲ့လေသည်။တတိယခလီဖွာအားလုပ်ကြံသူ မျးကို ရှာဖွေပေးရန်၊ဖမ်းချုပ်ပေးရန်၊အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ဂြိုလ်မွေခဲ့ လေသည်။
စစ်ဖီး(န)စစ်ပွဲ ဖြစ်ပွားရသည့် အခြေခံ၊အကြောင်းတရားများမှ တစ်ခုသည် လည်း(တတိယခလီဖွာ လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စ)ပါဝင်ပြီး ထောင်ပေါင်းများစွာ အသက်ဆုံး ရှုံး ခဲ့ရလေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် တတိယခလီဖွာအွစ်မန်၏ အကျီ င်္အားအလံအဖြစ်ထူခဲ့ သည်။အဖြစ်အပျက်မှာ သမိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင် ထင်ရှားကျော်ကြားလှပေသည်။ ဤအဖြစ်အပျက်ကို ဤ(စစ်ဖီး(န)စစ်ပွဲဖြစ်ရသည့် အကြောင်းအရာဖြင့်)ညွှန်ပြနိုင်ပေ သည်။
သို့သော် သမိုင်းစာမျက်နှာတွင် အံ့ဩစရာကောင်းသည့် အချက်မှာအေမာမ် အလီ(အ.စ)သည် ရှဟီးဒ်ဘွဲ့ခံယူပြီး၊အေမာမ်ဟစန်မိုဂ်ျသဗာ(အ.စ)အနေဖြင့်မတတ် နိုင်သည့်အဆုံး မိုအာဝေယာကို ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်တော်မူခဲ့ရပေသည်။ပြီးနောက်မို အာဝေယာအနေဖြင့် အချုပ်၊အချာ၊အာဏာတစ်ခုလုံးကို ချုပ်ကိုင်သွားခဲ့လေသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦး၊တစ်ယောက်တည်း အစ္စလာမ်မီအာဏာရှင် ဖြစ်ခဲ့လေသည်။(ထို အချိန်တွင်)လုံးဝတတိယခလီဖွာအွစ်မန် လုပ်ကြံ၊ခံရမှုကိစ္စကို လုံးဝမယူလာတော့ ချေ။တစ်နည်းဆိုရလျှင် လုံးဝအသတ်မခံခဲ့ရသည့် ပုံစံဖြင့် နေခဲ့လေသည်။
ဟုတ်ပေသည်။မှန်ပေသည်။(မိုအာဝေယာသည်)မိမိ၏ မကောင်းသည့်ရည် ရွယ်ချက်များကို လက်ဝယ်ရယူနိုင်ရန် တရားဝင်သည်ဖြစ်စေ၊မဝင်သည်ဖြစ်စေ၊အမှီ သဟဲအဖြစ်သုံးခဲ့လေသည်။ယုတ်စွအဆုံး အကယ်၍ ဤလမ်းအတွက် အချို့အပြစ်မဲ့ ပြည်သူများကို စွပ်ပဲစွဲရ၊စွဲရ၊ထောင်ပဲချရ၊ချရ၊သတ်ပဲ၊သတ်ရ၊သတ်ရ ၎င်းအဖို့အရေးမ ကြီးတော့ချေ။
အားလုံးအသိပင်၊ယဇီးဒ်(လ.န)ဗင်မိုအာဝေယာသည် ပြဿနာရှာသူ၊ပျက်စီး သူ၊ပြစ်မှု၊ဒုစရိုက်၊ကျူးလွန်သူ၊သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်သည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊အပြစ်မဲ့လူသားများ ကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သူ၊အရက်သေစာ၊သောက်စားသူ၊လောင်းကစားလိုက်စားသူ၊မ ကောင်းမှုဖြင့် စွန်းညှိနေသူ ဖြစ်ပေသည်။
မိုအာဝေယာအနေဖြင့် ဤကဲ့သို့သော် ပုဂ္ဂိုလ်အားမွတ်စလင်များ၏ ခလီဖွာ သမ္မတအဖြစ်နှင့် တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွ)၏ ကိုယ်စားလှယ်တော်အဖြစ် မိမိ၏ နောက်အတွက် နေရာပေးခဲ့လေသည်။
ဤအမှားသည် အမှားသေးသေးလေးဖြစ်ပါသလော? အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)သည်ဘဝတည်ဆောက်တော်မူခဲ့သည့် ကာလတွင် အစ္စလာမ်အသိုင်းအဝိုင်း တစ်ခုလုံးသည် အမှားမတရားအနေဖြင့် သိမ်းပိုက်ထားခဲ့လေသည်။အမှန်တရားအား မေ့လျော့ပစ်ခဲ့ကြပြီး ဖြစ်ပေသည်။ထိုအတွက်ကြောင့် အေမာမ်(အ.စ)အနေဖြင့် တော်လှန်ရေး ဆင်နွဲခဲ့ရလေသည်။အကြောင်းမှာ အမှန်တရားကို ပြန်လည်ရှင်သန် စေပြီး ပတ်ဝန်းကျင်၊အသိုင်းအဝိုင်းတွင် အမှားမတရားကို သုတ်သင်ရှင်းလင်းရန် အ လို့ငှာ ဖြစ်ပေသည်။
ဤလမ်းစဉ်နှင့် ဤရည်ရွယ်ချက်ကို အရယူဆွတ်ခူးနိုင်ရန် အလို့ငှာ မည်သည့် တန်ဖိုး၊အဖိုးအခကို ဖြစ်စေ ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ရှိတော်မူခဲ့လေသည်။
လေးစားအပ်ပါသော စာဖတ်သူအပေါင်းတို့….ချစ်ခင်လေးစားရပါသော အဇါ ဒါရီပြုလုပ်သူများခင်ဗျား၊….အဇါဒါရီအား မလွဲမသွေ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းဖြင့် ပြုလုပ်ပါလေ။နှစ်စဉ်၊နှစ်တိုင်း ပြည့်စုံသည်ထက်ပြည့်စုံစွာ၊ကျယ်ပြန့် သညထက် ကျယ်ပြန့်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် စီစဉ်ရပေမည်။ကြိုးပမ်းရပေမည်။ထိုမှ သာ အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ လက္ခဏာတော်များကို လေးစား၊အရိုအသေပြုဆို သည့်အဓိပ္ပါယ်ကို အမှန်တကယ် ဆောင်ရွက်ရာရောက်သွားပေမည်။
သို့သော်လည်းပဲ အဇါဒါရီပြုသည့်(မိုမေနီ၊မိုမေနာ)တိုင်း အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)အနေဖြင့် အမှန်တရားကို ရှင်သန်အောင်ပြုရန် အမှားမတရားကို သုတ်သင် ရှင်းလင်းရန် တော်လှန်ရေး၊ဆင်နွဲခဲ့ကြောင်းသိထားရပေမည်။ထိုမှသာဤလမ်းစဉ် အတွက် ရှေ့ဆက်ခြေတက်နိုင်မည် ဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်(အချိန်တိုင်း)၊နေရာတိုင်းတွင်အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န) (အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို သိထားမည်ဆိုလျှင် ကျွန်တော်တို့၏ အနီးတကာ့အနီး ကပ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်နှင့် တစိမ်းအကြား၊ကွဲလွဲမှုဖြစ်ပေါ်လာပါကလည်း ဟက်(က)အမှန်တ ရားသည် တစိမ်းဖက်က ဖြစ်နေမည်ဆိုလျှင် ခင်မင်မှု၊နီးစပ်မှုထက် ဥပဒေ၊တရားမျှ တမှုကို ဦးစားပေးပြီး ဟက်(က)အမှန်တရားဘက်မှ(၎င်းတစိမ်းဘက်မှ)ရပ်တည်ပေး ရပေလိမ့်မည်။
အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားသူကြီးများအနေဖြင့် မက်သဗ်ဗေအာရှုရာမှ သင် ခန်းစာယူထားမည်ဆိုလျှင် မည်သည့်ကွဲလွဲမှုအတွက် ဖြစ်ပါစေ၊အသေးတကာ့၊အ သေးဆုံးဟက်(က)အမှန်တရားနှင့်ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ထုတ်ပြန်မည် မဟုတ်ချေ။ ယုတ်စွအဆုံး မည်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှု ဖြစ်စေ(သို့)လာဘ်ပေး၍ဖြစ်စေ၊အမှန်တရား ၏ဆန့်ကျင်ဖက် အမိန့်ပေး၍ ရမည်မဟုတ်ချေ။
အကယ်၍တစ်ခါတလေ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမည်။အစ်ကိုများ၊မောင်များအနေ ဖြင့် အစ်မများ၊ညီမမျး၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို ၎င်းတို့အားမပေးဘဲစားသုံးခဲ့မည်ဆိုလျှင် (သို့)အစ်ကိုကြီးမှ ညီငယ်များ၏ ရပိုင်ခွင့်အမွေကို မပေးမည်ဆိုလျှင်အေမာမ်ဟို စိုင်း(န)(အ.စ)၏ ရည်ရွယ်ချက်များကို မသိရှိ၊မနားလည်၊သဘောမပေါက်သေးသည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။
အလုပ်ခိုင်းသူ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်သည် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော် လှန်ရေး ရည်ရွယ်ချက်များကို သိရှိနားလည်မည်၊ပြီးနောက်အေမာမ်အပေါ်အလ္လာဟ် ဟိုအရှင်မြတ် စေလွတ်တော်မူသည့် အေမာမ်ဟု သက်ဝင်ယုံကြည်မည်ဆိုလျှင်လုံးဝ ဧကန်မလွဲ မိမိအလုပ်သမားများ၏ လုပ်အားခကို မည်မျှပင်များသည်ဖြစ်စေ၊နည်း သည် ဖြစ်စေ၊မပေးဘဲနေမည် မဟုတ်ချေ။(ပေးကိုပေးမည်)မိမိကိုယ်အား အလုပ်သ မားများကို ဆပ်ဖို့ကျန်နေသည့် အကြွေးရှင်အဖြင့် အဖြစ်ခံမည် မဟုတ်ချေ။
ဟုတ်ပါသည်။မှန်ပေသည်။ကျွန်တော်တို့(ရှီအာအေမာမ်မီယာ)အနေဖြင့်ကိုယ် တော်၊ရှိုဟဒါများ၏ဦးသျှောင် အေမာမ်ဟိုစိုင်း(န)(အ.စ)၏တော်လှန်ရေးအား သိလာ လေလေ၊နားလည်လာလေလေ၊ထိုသိရှိနားလည်မှုနှင့်အညီ(မိမိတို့ဘဝ၏ နေ့စဉ်၊နေ့ တိုင်း တည်ဆောက်မှုတွင် လက်တွေ့ကျလေလေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။အကောင်အ ထည်ဖေါ်လေလေ ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။